လေဖြတ်ပြီး စကားမပီ၊ စကားမသွက်ဖြစ်နေသူများအတွက် သပွတ်ခါးသီး - Myanmar Red News
လေဖြတ်ပြီး စကားမပီ၊ စကားမသွက်ဖြစ်နေသူများအတွက် သပွတ်ခါးသီး
လေဖြတ်ပြီးနောက် စကားမသွက်သူများ၊စကားမပီသ သူများ ရှိနေကြပါသည်။မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများထဲတွင်လည်း မကြာခဏမြင့်တွေ့ရ၍ အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပေ လိမ့်မည်။
မိတ်ဆွေတစ်ဦး လေဖြတ်သည်ကြား၍ သွားရောက်ကြည့် ရှု့ရာ ထိုဝေဒနာရှင်မှာ စကားများစွာပြောနေရှာသော်လည်း ဗလုံးဗထွေးဖြစ် နေရှာ၍အတော်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။နောက်တစ်ဖန် ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ရာ ယခင်နှင့် မတူစကားပြောသံကို ပီပီသသသဲသဲ ကွဲကွဲကြားရပြီး စကားပြောပါသွက်လာသည်မို့ ဘာလိုကုလိုက်တာလဲ မေးကြည့်ရာ –
ဆေးနည်း – သပွတ်ခါးသီးကို တောကများများရှာဝယ်ပြီး လူတစ်ယောက် ကောင်းကောင်းနင်းနိုင်အောင်ကျယ်သည့် စဥ့်အင်ဒုံတွင် ဆား(၁၀)သားအောက်ခံထားကာ အပေါ်တွင် သပွတ်ခါး သီးစိမ်း(၁၀)လုံးကို တင်၍ နေ့တိုင်း နံက်တစ်ခါ ညနေတစ်ခါ နင်းပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။
အိပ်ရာမှမထနိုင်သူများအား သပွတ်ခါးသီးနှင့် ဆားရောပြီးအမြှုပ်ထနေသော သပွတ်ခါးဖြင့် ခြေထောက်နှင့်လက်များကို ပွတ်ပေးရသည်ဆိုပါသည်။သပွတ်ခါးကိုအမြှုပ်ထွက်အောင်ပြုပြီးလည်းပွတ်တိုက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သပွတ်ခါး၏အခါးသည် ပါးစပ်ဆီ သို့အခါးဓာတ်ရောက်ရှိစေပြီး စကားပြောပီသလာ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတော့သည်။မတ်တက်ရပ်၍နင်းနိုင်သူအတွက် သပွတ်ခါး အမြှုပ်ထွက်အောင်နင်းရပါသည်။လေဖြတ်၍စကားမပီသူများသပွတ်ခါးနင်းခြင်းဖြင့် စကားပြောပီသလာပါစေ….
လဖွေတျပွီး စကားမပီ၊ စကားမသှကျဖွဈနသေူမြားအတှကျ သပှတျခါးသီး
လဖွေတျပွီးနောကျ စကားမသှကျသူမြား၊စကားမပီသ သူမြား ရှိနကွေပါသညျ။မိဘဆှမြေိုးမြားနှငျ့ ရငျးနှီးသော မိတျဆှမြေားထဲတှငျလညျး မကွာခဏမွငျ့တှရေ့၍ အတျောစိတျမကောငျးဖွဈကွပေ လိမျ့မညျ။
မိတျဆှတေဈဦး လဖွေတျသညျကွား၍ သှားရောကျကွညျ့ ရှု့ရာ ထိုဝဒေနာရှငျမှာ စကားမြားစှာပွောနရှောသျောလညျး ဗလုံးဗထှေးဖွဈ နရှော၍အတျောကို စိတျမကောငျးဖွဈခဲ့ရပါသညျ။နောကျတဈဖနျ ထပျမံသှားရောကျခဲ့ရာ ယခငျနှငျ့ မတူစကားပွောသံကို ပီပီသသသဲသဲ ကှဲကှဲကွားရပွီး စကားပွောပါသှကျလာသညျမို့ ဘာလိုကုလိုကျတာလဲ မေးကွညျ့ရာ –
ဆေးနညျး – သပှတျခါးသီးကို တောကမြားမြားရှာဝယျပွီး လူတဈယောကျ ကောငျးကောငျးနငျးနိုငျအောငျကယျြသညျ့ စဉျ့အငျဒုံတှငျ ဆား(၁၀)သားအောကျခံထားကာ အပျေါတှငျ သပှတျခါး သီးစိမျး(၁၀)လုံးကို တငျ၍ နတေို့ငျး နံကျတဈခါ ညနတေဈခါ နငျးပေးခွငျးကွောငျ့ဖွဈသညျဟုဆိုပါသညျ။
အိပျရာမှမထနိုငျသူမြားအား သပှတျခါးသီးနှငျ့ ဆားရောပွီးအမွှုပျထနသေော သပှတျခါးဖွငျ့ ခွထေောကျနှငျ့လကျမြားကို ပှတျပေးရသညျဆိုပါသညျ။သပှတျခါးကိုအမွှုပျထှကျအောငျပွုပွီးလညျးပှတျတိုကျပေးနိုငျပါသညျ။
ထိုသို့ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ သပှတျခါး၏အခါးသညျ ပါးစပျဆီ သို့အခါးဓာတျရောကျရှိစပွေီး စကားပွောပီသလာ ခွငျးဖွဈကွောငျးသိရတော့သညျ။မတျတကျရပျ၍နငျးနိုငျသူအတှကျ သပှတျခါး အမွှုပျထှကျအောငျနငျးရပါသညျ။လဖွေတျ၍စကားမပီသူမြားသပှတျခါးနငျးခွငျးဖွငျ့ စကားပွောပီသလာပါစေ….
ကင်ဆာရောဂါ နုရင် သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ ကောက်ရင်ပန်းပင်
ဒူးကျီးပေါင်းတက်သူများအတွက် ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်းလေး
Jul 25, 2021 mmnews
ကျီးပေါင်း ၊ဂေါက်ရောဂါ၊ ခြေဆစ် လက်ဆစ်နာခြင်းတို့အတွက် ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်း
Jul 24, 2021 mmnews
လိပ်ခေါင်း၊ ပန်းသေ၊ ပန်းညှိုး၊ ထုံကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများအတွက် ဆေးဖက်ဝင် ဗုဒ္ဓံသရဏံပင်
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်သစ်သည် သေဆုံးနှုန်းလုံးဝသုညရှိသည့် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု
Jul 23, 2021 mmnews